Songandina Archives - Page 944 sur 1062 -
Asan-jiolahy : Mpitondra fivavahana maty voatifitra
24/04/2017 admintriatra 0
Raha ireo mpandraharaha sy ireo mpanefoefo no tena mandry andriran’antsy noho ny afitsok’ireo olon-dratsy, ankehitriny dia iharan’izany asan-jiolahy izany ihany koa hatramin’ireo mpitondra fivavahana. Mompera iray, mpitondra fivavahana ao amin’ny eglizy katolika any Ambendrana-Antsohihy no …Tohiny
Antsohihy : Karana mpivady voatafika
Karana mpivady, tompona hotely lehibe iray ao Antsohihy no notafihin’ny jiolahy mitam-piadiana tao an-tokantranony ny alin’ny sabotsy 22 Aprily lasa teo. Niditra an-keriny tao an-trano ireo olon-dratsy ireo ary nangataka ny hamoahana ny vola sy …Tohiny
Mpivarotra vy eny Isotry : Manjaka ny varo-maizina
Tsy mitsaha-mitombo ireo mpivarotra vy tsy ara-dalàna eny Isotry sy ny manodidina. Ny ankabeazan’ireo olona ireo dia manao izany ho toa ny asa fivelomana mihitsy, ary raha ny fanadihadiana natao dia hita taratra fa mahavelona …Tohiny
Maharante Jean de Dieu : Tsy hitaona ny mpikambana hanongam-panjakana ny Fizafato
Ambohi-pihaonan’ireo zanak’i Toliara omaly ny ivon-toerana ara-kolontsain’ny Cnaps eny Vontovorona. Fotoana nifampiarahabana nahatratra ny taona teo amin’ireo mpikambana ao amin’ny Fizafato na Fikamabanan’ny zanaky ny faritanin’i Toliara. Nandritra izany fihaonana izany no nanambaran’ny minisitry ny …Tohiny
« 1 … 942 943 944 945 946 … 1 062 »